ကိုကြီးကျော်ကို ကိုးကွယ်ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကိုကြီးကျော်ကို ကိုးကွယ်ပါ
Posted by phone_kyaw on Mar 3, 2012 in Copy/Paste | 18 comments
ဦးဘသာ။ ။ နေအုံး..ငါ့ကောင်…မင်တို့ နိုင်ငံခြားက နိုင်ငံရေးအယူအဆတွေ၊ ဓလေ့တွေကို ငါတော့ ငါ့သားသမီးတွေကို မကူးစက်ရအောင် အမြဲတန်းသွန်သင်ပေးတယ်။ မင်းခလေးတွေကော မြန်မာစကား နဲ့မြန်မာဓလေ့ကို ချစ်မြတ်နိုးအောင် သင်ပေးပေါ့ကွာ။
“ဦးလေး ဦးဘသာ….ဒီလောက်တောင် မြန်မာကို အရမ်းအထင်ကြီးနေရင် ချစ်နေရင် ဦးလေးဘုရားရှစ်ခိုးရင် ဂေါတမဘုရားကို ရှစ်မခိုးနဲ့။ ကိုကြီးကျော်တို့ ၊ မနှဲလေးတို့ ပဲ ကိုးကွယ်ပါလား။ ဂေါတမဘုရားက မြန်မာမှမဟုတ်တာ။ ကုလားကြီးဟာကိုး…”
” မင်းကွာကြံကြံဖန်ဖန်….ငါ့မြန်မာနိုင်ငံက အခုချက်ချင်းထွက်သွား” ဆိုပြီး ရေနွေးအိုးနဲ့ထ ပြီးပေါက်ပါလေရောဗျာ။
ရောက်လာပီ။တော်ရာနေရာသွားနေစမ်းပါဗျာ ဟဲ့ ရှူး ရှူး
ဒီလူကတော့ ကေသ ထားတဲ့ ဂတုံး နဲ့ တွေ့ တော့မှာဘဲ ။
ခင်ဗျား အတွက်ကတော့ ၊ ကိုးကွယ်ရမယ့်ဟာ တော်တော်များမှာဘဲနော် ကိုဖုတ်ကြော်
ဟိုလူက ဟိုဟာလေးပေးရင် ၊ ဟိုလူ့ ကို အဖေ ခေါ်လိုက်…
ဟိုနိုင်ငံ က ခိုလုံခွင့်ပေးရင် အဲ့နိုင်ငံ ရှေ့ မှာ ဖင်ကုန်းလိုက်နဲ့ …
အခု ဒီပို့ စ် ကို ဖတ်ပြီးမှဘဲ ၊ခင်ဗျား ဖြစ်နေပုံကို မျက်စိထဲ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်လာတယ်
ကျေးဇူးပါဘဲဗျာ ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖော်တဲ့အတွက် ။
ဘာလို့ လူမုန်းသူမုန်းခံ ပြီး
ဒါ ခင်ဗျားရဲ့ ဝသီလား..
ဒီလူ့ နှယ့်ဗျာ -ီးစုပ်၊-င်ခံဘဝက မတက်တော့ဘူး။
မင်းအမေလင်ကပြောတာလား၊ မြတ်စွာဘုရားကို။ အဲဒီအချိန်တုံးက တရုတ်၊ကုလား၊အမေရိကန် မရှိဘူး။ မင်းအခုဖင်ခံနေတဲ့ အဖြူအမဲလဲမရှိဘူး။ မင်းကိုငါ ဘာကျမ်းညာကျမ်းမပြောဘူး။
ကမ္ဘာကလက်ခံထားတဲ့ အယူအဆ အမှန်တွေရှိတဲ့Wikipaedia ဆိုတဲ့ စွယ်စုံကျမ်းကြီးမှာကြည့်ဦးဗုဒ္ဓက ဘာလူမျိုးဆိုတာ။ မင်းသိပ်ဖင်ယားနေရင်တခြားနေရာမှာယား။ အေးဟုတ်တယ် မင်းကိုပြောနေတာ phone_kyaw ဆိုတဲ့မျိုးမစစ်၊ အဖေမရှိပဲမွေးတဲ့ကောင်။
သကြီးကျုပ်ကိုban ရင်လဲပါ၊ သို့သော် ဘာသာရေးစော်ကားမှုလုပ်၊ အများတကာကို အယူလွဲအောင်လုပ် နေတဲ့မြေမျိုမယ့်ဒီခွေးကောင်phone_kyaw ကိုလဲအရေးယူပေးပါ။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ဟာ စကြာ(သကျ)Ethnicity-Shakya မျိုးနွယ်ပါ၊ ကုလားလုံးဝ(လုံးဝ)မဟုတ်ပါ။ မြတ်စွာဘုရားကို ကုလားလူမျိုးလို့အတင်းကာရောလိုက်ပြောနေတတ်တာ က ” မိမိကိုကိုယ် အငုံစိတ်ဝင်နေသော၊ ကလားလူမျိုးမို့ကုလား ခေါ်တာကိုပင် ရှက်စိတ်ဝင်ကာရှက်ရမ်းရမ်းတတ်သော၊ လူပါးအရမ်းဝတတ်သော၊ ပြသနာရှာတတ်သော ၊ မည်သူမှ နှိမ့်ချခြင်းမရှိပါပဲ နှိမ့်ချစိတ်ဝင်နေတတ်သော သူတစု” ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုကိုယ့်ကို အောက်တန်းစား ဆိုတော့သူများကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာ ကို အတင်းကာရော ပေါက်ကရပြောပြီး ၊ သူတို့နဲ့လူမျိုးတူပါ၊ သူတို့အမျိုးမြင့်မြတ်ပါတယ် အတင်းလုပ်တတ်တဲ့လူစားမျိုးတွေပါ။
နောက်တမျိုးက တော့ မိမိကိုကိုယ်ဘာလူမျိုးမှန်းသေချာမသိ၊ အဖေ မည်သူ့ခေါ်ရမယ်မသိ ၊ လူမျိုးတကာကို အဖေခေါ်အထင်ကြီး ဖင်လိုက်ခံနေတတ်တဲ့ phone_kyaw လိုကောင်မျိုးတွေပါ။
ဝီကီပီဒီယားပြောတာက an ancient tribe (janapada) of Nepal and India။ မြတ်စွာဘုရားသည် အိန္ဒိယနှင့် နီပေါ မျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာတွေက အန္ဒိယ နဲ့ နိပေါတွေကို ကုလားလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ကျနော့် ဒီလိုပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားက ဗမာမဟုတ်ပါ။ မွန်လည်းမဟုတ်ပါ။ တရုတ်လည်းမဟုတ်ပါ။ ကျနော်မှားလား မှန်လား ဘုန်းကြီးများ ပြင်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ဆိုတာ Virtual World တစ်ခုပါဗျာ
ကိုဘုန်းကျော်ပြောတာတချို့ ကျုပ်လည်း မကြိုက်ပါဘူး..
ဒါပေမဲ့.. သူပြောတာကို မကြိုက်ရင်.. မကြိုက်ဖူးပဲပြောစေလိုပါတယ်…
ကန့်ကွက်တယ်..ရှုံ့ ချတယ်.. လက်မခံဘူး..ကြိုက်သလိုရေးတင်လို့ရပါတယ်..။
သူ့ကို ဆဲဆိုကြမ်းမောင်းဖို့.. မည်သည့်မန်င်ဘာမှာမှ(မည်သည့်ရွာသူားထံမှာမှ) အခွင့်မရှိပါ…။
မြန်မာပြည်မှာ.. ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကို သွားနေပါတယ်..။
ဒီစံနစ်ရဲ့…အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့.. အလေ့အကျင့်ကို မွေးယူကြပါ..။
သဂျီးကို ဝိုင်းဆဲဂျကွာ…ဘာအချက်အလက်မှ မလိုဘူး.. ဆဲတဲ့စာလုံးတိုင်းကို ပွိုင်တရာစီ ငါ့မှာရှိတဲ့ ပွိုင့်ထဲကပေးမယ်…. :mad:
သူကြီးကို လေးစားသောအားဖြင့် စကားနားထောင်ပေါ့မယ်။
အရင်က ကျနော်လဲ ဒီလူ့ ပို့ စ်တွေ ဝင်မမန့် တော့ဘူးနေမလို့ 
နေသေးသဗျ။ဒါပေမယ့် တက်လာတဲ့ပို့ စ်တိုင်းက ကျနော့် ဒေါသကို
ကျနော်ကဘယ်သူ့ကိုမှအလကားစော်ကားမနေပါဘူး။ <<<>> ဒီလိုပေါက်ကရလာပြောလာလုပ်လို့ ငြိမ်ခံနေရင်သူပြောတာအမှန်တွေပါဆိုပြီး အများတကာအထင်အမြင်လွှဲကုံရင် ဘယ်သူတာဝန်ယူမှာလဲ ???
မန်းဂေဇက်ကလူတော်တောဖတ်တဲ့ နေရာပါ၊ ဒီလိုပေါက်ကရေးတာကိုဘာမှပြန်မပြောလို့ အများသူငါကအမှန်ထင်အယူလွဲကုန်ရင်ရော ???
ကျုပ်တို့မြန်မာပြည်က ငွေကြေးချမ်းသာမှု၊နည်းပညာတိုးတက်မှု အောက်ဆုံးမှာပါ၊ သို့သော် ဘာသာရေး အယူအဆ (နည်းမှန်လမ်းမှန် ဘာသာမှန်) ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံမို့ လိုအပ်ချက်တွေပြည့်စုံနေတာပါ။
အဲဒီဘာသာပါပျောက်သွားရင် တော့ မြန်မာပြည်မှာ ဘာနေချင်စရာရှိဦးမလဲ။
အဘ ရေ ကြည့်ရှောင်တော့ဗျာ။ပြောသင့်သလောက်ပြောလို့ မရရင်လဲထားခဲ့တော့ဗျာ။
သူ့ အကြောင်းနဲ့ သူဘဲ။
All Right Mg Than Htut Oo. Thanks for ur advice.